Glam Ndụ | November 2021
Ịchọrọ inwe ihu ọma karịa n'ịhụnanya? Atụmatụ ime ụlọ feng shui ndị a nwere ike ịgbanwe ndụ gị
2021 | ẸNam Ekese Paul Adams | Atiya: Glam Ndụ
Obere mmezi feng shui nwere ike inye aka wepu ihe mgbochi anụ ahụ ma mepụta ike dị mma gburugburu ụlọ gị. Gụọ maka ụfọdụ aghụghọ feng shui na -achọ mma iji gbanwee ime ụlọ gị (yana ikekwe ndụ ịhụnanya gị) n'afọ a.
Otu esi edobe okpokoro okpokoro (n'ihe na -erughị nkeji iri na ise)
Ịme oriri oriri abalị? Emela nrụgide: ịtọ tebụl kwesịrị ịbụ akụkụ kachasị mfe. Nzọụkwụ ise a na-ekpuchi ntọala ntọala okpokoro (site na chaja na efere ruo ihe ọlaọcha na ihe ịchọ mma) ma nyere aka mepụta mmetụta mara mma yana obere ọrụ n'aka gị.
Ngwaọrụ nwanyị ọ bụla kwesịrị inwe, dị ka '' Scott Scott Brothers na More nke ndị ọkwá nkà kacha ewu ewu na TV si dị.
Onye nnọchi anya Maazi Fix-Ya nke ihe ngosi ndozi ụlọ nwere ike ịdị ezigbo ọkụ, mana ndụmọdụ ha bara uru. Gurus ndị a na-eme N'onwe-akụkụ ụbụrụ hà nhata, brawn, na amara-bụ ndị dike kachasị ọhụrụ nke TV: E kwuwerị, kedu ihe na-ekpo ọkụ karịa ikiri ka ụmụ nwoke jiri aka ha na-ewu ihe? (Ọ bụghị ọtụtụ.) Ugbu a ha bụ
Ihe iri dị mkpa Alton Brown maka kichin mbụ gị toro
Ị dịla njikere ịgbanye efere mpekere mpako nke nne na nna gị maka ụfọdụ nnukwu nri kichin? Ọkachamara nri na agwa TV Alton Brown na-ekerịta ihe iri dị mkpa onye ọ bụla chọrọ maka kichin na-arụ ọrụ nke ọma.
Ntụziaka Cocktail ezumike ezumike ị nwere ike iji cachaça Party Party Starter
Ya mere, ka vodka nọdụ ebe a wee dịrị njikere ịmasị ndị ọbịa oriri gị na mmanya pụrụ iche a na -eme ememme.
ndị nkịtị n'ihu na mgbe wrinkles
ndepụta ihe nkiri ihe omimi 2018
ntutu kacha mma maka ntutu frizzy
ka esi apụ isi n'ụtụtụ ọ bụla